जन्मदिनमै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यति ठूलो षडयन्त्र, बालुवाटारले असफल पार्यो त!Nepalpana - Nepal's Digital Online
जन्मदिनमै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यति ठूलो षडयन्त्र, बालुवाटारले असफल पार्यो त!
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज जन्मदिन मनाइरहेकै बेला उनलाई झस्काउनेगरी एउटा खबर आयो, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजीनामा दिए । यो खबरको अर्थ हो प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली हार्दैछन् अर्थात विपक्षमा फैसला आउने भएकाले खरेलले राजीनामा दिए ।
यो प्रचारको सिलसिला सञ्चारमाध्यवमबाट सुरु भयो । पहिलो त राजीनामा दिएको ठोकुवा गरियो, दोस्रो फैसला विपक्षमा आउने भएपछि पछि हटेको भन्ने अर्थमा प्रचार गरियो । यसरी बाहिर माहोल प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बनाउने षडयन्त्रलाई बालुवाटारले खण्डन गरेर असफल पारेको छ ।
बालुवाटारले त खण्डन गर्यो नै महान्यायाधिवक्ता खरेल स्वयंले पनि कडा शब्दमा खण्डन गरे । आफूले राजीनामा नदिएको उनले स्पष्टिकरण दिए ।
समाचार के सम्म आयो भने विघटन मुद्दाको बहसका क्रममा सरकारको बचाउ गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेको र यसैकारण खरेलले राजीनामा दिएका छन् ।
तर खरेलले आफ्नो र सरकारको बदनाम गर्नका लागि दुष्प्रचार गरिएको भन्दै भण्डाफोर गरे । ‘मैले राजीनामा किन दिने? दिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ खरेलले भने ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफूविरुद्ध कुनामा बसेर षडयन्त्र गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘मेरो विरुद्ध कुनै कुनामा बसेर मान्छेहरुले षडयन्त्र गरेर राजीनामाको हल्ला चलाए । यो सत्य होइन । फैसला हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वास छ । अदालतको फैसलालाई सरकारले सम्मान गर्छ । हल्लाको पछि नलाग्न म आम जनमानसमा अनुरोध गर्दछु,’ खरेल भने।
जन्मदिनमै प्रधानमन्त्रीलाई धक्का दिनेगरी सरकारको बदनाम प्रयासमा भएको हल्ला अन्तत यसरी खण्डित भयो ।
फाल्गुण ११, २०७७ मंगलवार १३:०३:३५ बजे : प्रकाशित